तपस्वी बम्जनलाई १४ वर्ष जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर, अब के हुन्छ ? — Imandarmedia.com
४माधव नेपालसँगको भेटपछि नेम्बाङले खोले मुख, भएको रहेछ यस्तो कुरा
५प्रधानमन्त्री पदमुक्त भयको २४ घण्टा नबित्दै कांग्रेसले गर्यो यति महत्वपुर्ण निर्णय
तपस्वी बम्जनलाई १४ वर्ष जेल सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । आफुलाई तपस्वी बताउने कथित धर्म गुरु रामबहादुर बम्जनलाई कानुनी कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । सर्लाही जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले ब’ला’त्कारको आरोप लागेका तपस्वी बम्जनविरुद्ध १४ वर्ष कैद सजायको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।
सर्लाही प्रहरीले हद म्यादका कारण आरोप बम्जनलाई पक्राउ नगरि अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको थियो। बम्जन माथि २०७२ मा आश्रममा आएका अनुयायीहरुको ह’त्या र ब’ला’त्कार गरेको अभियोग लागेको थियो । सिन्धुलीमा आश्रम बनाएर बसिरहेका बम्जनलाई प्रहरीले दुईपटक प’क्रा’उ गर्ने प्रयास गरेपनि सफल नभएको जनाएको छ।
उनलाई प्रयोग गरेर देश तथा विदेशबाट लाखौ डलर कुम्ल्याई रहेका उनका संरक्षकहरुले उनलाई हालसम्म जंगलमा लुकाई राखेका छन् । बम्जनलाई गाडी घोडादेखी हेलिकप्टरसम्म चढ्ने सुबिधा दिएर जंगलमै बस्न उद्धत गरिरहेका उनका संरक्षकहरुले प्रहरीलाई छल्दै कहिले सर्लाही त कहिले सिन्धुलीको जंगलमा उनलाई लुकाएर राख्ने गरेका छन् ।
उनीमाथि दर्जनौ यौ’न हिं’सा र ब’ला’त्कारको आरोप लागेका समाचार सार्बजनिक भइसक्दा पनि केहि मान्छेहरु भने अन्ध बिश्वासका कारण अझै उनलाई धर्म गुरु मानेर पुजा गर्दै आइरहेका छन् । हाल उनलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनका अनुयायीहरु समेत बाधक बनिरहेको प्रहरीको भनाई छ ।
गत असार ३ गते नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बेलबहादुर पाण्डे नेतृत्वको टोलीले बम्जन रहेको सिन्धुलीस्थित आश्रममा छापा मारेको थियो । अनुसन्धान अधिकृतहरुले बम्जन त्यही आश्रममा भएको निष्कर्ष निकाल्दै बिहान ४ देखि २ बजेसम्म विशेष सर्च अप्रेशन चलाए पनि उनि त्यहाँ भेटिएनन् र प्रहरी रित्तो हात फर्किएको थियो ।
कमलामाई नगरपालिका–९, पैरेको जंगलभित्र १५ रोपनी क्षेत्रफलमा बनाइएको आश्रमको कम्पाउन्डमा सुरक्षा फौजकै शैलीमा सेन्ट्री तैनाथ छन् । मध्यभागमा आलिसान बङ्गला भित्र जीम हलदेखि स्वीमिङ पुलसम्मका सुबिधा छन् । बिदेशी सामाग्रीले उनको घर भरिएको छ । भान्सा, बेडरुम र बाथरुम जताछिरे पनि तारे होटल झैं कतै बल्ने ढुंगा सजाइएका छन्, कतै आकर्षक पेन्टिङ छन् । यस्तो सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा नेपाल प्रहरीका ‘मोस्ट वान्टेड’ कथित लिटल बुद्ध भनिने रामबहादुर बम्जन बस्ने गर्छन।